Laftagareen oo mixnad ku ah mira-dhalka shirka | KEYDMEDIA ONLINE
Laftagareen oo mixnad ku ah mira-dhalka shirka
Xaaladda murugsan ee doorashada ayaa ka sii dari karta haddii shirka lagu kala tago, waxaana dib u billaaban kara abaabukii ciidanka, oo hadda xogaha qaar tilmaamayaan inuu caasimadda ka socdo.
MUQDISJO, Soomaaliya - Shirka Golaha Wadatashiga Qaran, ayaa galay maalintiisii 4-aad, waxaana galankii danbe ee shalay la guda galay ka doodidda qodobka ugu adag ajaandaha guud ee shirka, kaas oo ah qorshaha iyo hoggaanka amniga dalka.
Qodobkaan oo aan hore miiska u saarneyn, ayaa soo if-baxay kadib af-ganbigii 27-kii December, ka dhacday xaafiiska Ra’iisul Wasaaraha iyo Xurunta Golaha Wasiirrada, waxaana dhaqan-galkiisa gadaal ka riixaya Ra’iisul Wasaaraha Xil-gaarsiinta.
Sida ay xaqiijinayaan ilo ku dhow shirka, Mr. Rooble, wuxuu ku doodayaa in doorasho hufan oo amnigeeda la isku halleyn karo, uusan ka qaban karin waddanka, haddii uusan masuul ka ahayn amniga doorashooyinka iyo midka guud ee dalka.
Warar lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya, in billowgii doodda uu MW KGS, Cabdicasiis Lafta-gareen, si cad u sheegay in hoggaanka amniga guud ee waddanka looga danbeeyo Madaxweynihii hore Farmaajo, isla-markaana Ra’iisul Wasaaruhu kaliya masuul ka noqdo amniga doorashooyinka oo lagu wareejiyay 1-dii May sanadkii hore.
Doodda Lafta-gareen, waxaa si weyn kaga hor yimid Madaxweynaha Puntland Siciid Deni, kaas oo Ra’iisul Wasaaraha ku garab istaagay in Golaha Wadatashiga Qaran, uu gacanta u galiyo hoggaanka guud ee amniga, si looga fogaado hoggaan amni oo lagu loollamo mar kale.
MW Jubbaland, Axmed Madoobe, ayaa isna doodda sidaas u dhigay, hayeeshee, MW GM, Qoorqoor, iyo MW HSH, Guudlaawe, ayaa la sheegay in ay dhexdhexaadnimo muujiyeen, halka Guddoomiyaha Gobolka Banaadir, Cumur Finish, si buuxda u taageeray doodda Lafta-gareen oo ah in Rooble, kaliya masuul ka noqdo doorashooyinka.
Xalay waxaa lagu kala hoyaaday halkaas, hayeeshee, isku soo noqodkii saaka, Madaxweynaha KGS, Lafat-gareen, ayaa ka hor yimid in la sii wado doodda ku addan Amniga, wuxuuna ku hanjabay inuu ka baxayo shirka, halk MW Puntland, uu qudhiisu sheegay in ay qasab tahay in meesha laga saaro masuuliyadda amniga Farmaajo.
Rooble, wuxuu diiradda saarayay in ugu danbeyn maanta Goluhu hoos geeyo xilka Taliyaha Guud ee Ciidamada Qalabka Sida, hayeeshee, diidmada Lafta-gareen iyo aamusnaanta Qoorqoor, ayaa sabab u noqon karta burburka shirka in lagu kala tago.
Rooble, wuxuu doonayaa in ay si toos ah uga amar qaataan taliyayaasha CQS, meeshana laga saaro amarrada uu Farmaajo siiyo, sida uu ku sheegay shirkiisii jaraa’id ee 27 December 2021.
Guudlaawe iyo Cumar Finish, ayaa dhawaan shir kula yeeshay Huteel Decale, odayaal iyo Siyaasiyiin ku heyb ah, kuwaas oo ku wargaliyay in ay taageeraan qorshaha amniga guud ee dalka uu kula wareegayo Ra’iisul Wasaare Rooble.
Qado kadib, waxaa dib la isgu laabtay miiska wadahadalka, Rooble, waxaa ka go’aan inuu la wareego hoggaanka ciidanka, wuxuuna taageero ka heystaa Deni iyo Madoobe, halka Laftagareen iyo Cumar Finish uu ka dhex guuxayo Farmaajo.
Golaha Midowga Musharixiinta, dhankooda, waxa ay Madaxda shirka fadhisa u sheegeen in guud ahaan amniga dalka lagu wareejiyo Ra’iisul Wasaaraha, maadaama Farmaajo uusan joojin doonin adeegsiga ciidanka, waa sida ay hadalka u dhigeene.
Doodda Lafta-gareen, waxa ay jawaab u tahay waraaqdii Wasaaradda amniga ee la xariirtay in NISA faahfaahin ka bixiso xirigga Mukhtaar, waxaana Laftagareen laga soo xigtay in amni Rooble hoggaaminayo uusan Madaxtooyada Koofur galbeed amni u ahayn, maadaama u doonayo inuu xabsiga ka soo daayo Mukhtaar Roobow oo taageero xooggan ku leh Bay iyo Bakool.
Sida ay sheegayaan dadka siyaasadda u dhuunduleela Lafta-gareen, Qoorqoor iyo Cumar Finish, ayaa dusha saaran doona masuuliyadda fashilka shirka haddii lagu kala tago.
Wakiillada Beesha Caalamka, oo Isniintii kulan la qaatay Madaxda Shirka ka qeyb galeysa, waxa ay sheegeen in laga fogaado wax kasta oo fashillin kara wadahadallada.